राष्ट्र बैंकले माग्यो ३ जना इन्जिनियर र १० जना चालक, तलब कति ? | Ratopati
शनिबार १५ कात्तिक, २०७७ Saturday, 31 October, 2020
राष्ट्र बैंकले माग्यो ३ जना इन्जिनियर र १० जना चालक, तलब कति ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ८, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले करारमा तीन जना सिभिल इन्जिनियर र १० जना सवारी चालक माग गरेको छ । राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा दुई जना र सिद्धार्थनगर कार्यालयमा एक जना सिभिल इन्जिनियर माग गरिएको हो ।
स्नातक उत्तीर्ण गरि दुई वर्षको कार्य अनुभव भएकाले सिभिल इन्जिनियरिङ पदमा निवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले असोज २२ गतेसम्ममा आवेदन दिन सक्ने छन् । सिभिल इन्जिनियरको मासिक तलब ५९ हजार ७०० रुपैयाँसहित अन्य सुविधा तोकिएको छ । करार अवधि ६ महिनाको हुनेछ ।
यता सवारी चालक पदमा कम्तिमा १० वर्ष सवारी चालक अनुभव भएको र ४५ वर्ष ननाघेकाले असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । चालकको तलब २८ हजार र खाजा खर्च २ हजार तोकिएको छ । करार अवधि ६ महिनाको हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले माग्यो १०० जना कर्मचारी (सूचनासहित)
नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालले माग्यो कर्मचारी
रेल्वे कम्पनीद्वारा १ सय २९ कर्मचारी माग, आवेदन पर्‍यो ३२ हजार
कुमार विकको खुट्टा छिनाल्ने आरोपितको जुत्तामा जब रगत देखियो...
रात्रिकालीन खेल हेर्ने विराटनगरवासीको चाहना पूरा हुँदै
बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४६ हजार नाघ्यो
पत्रकार महासंघ यूकेले ‘स्वास्थ्य सम्वाद’ सञ्चालन गर्ने
दक्षिण कोरियाको कार निर्यातमा वृद्धि
भारतमा कोभिड–१९ संक्रमित ८० लाख ८८ हजार नाघे, १ लाख २१ हजार बढीको मृत्यु
गहुँ छर्ने बेलामा पनि सुदूरपश्चिममा मल अभाव
मदन भण्डारी फाउण्डेशनको क्षेत्रीय समिति गठन
चितवनमा कारको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया चाँडै : मन्त्री भट्ट